Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ formats nke videos dị na ahịa ma, MP4 bụ ihe kasị mma n'etiti ha. YouTube bụ ebe anyị nwere ike inwe ohere a bulite ndị niile ụdị videos. Ma YouTube n'ọnu MP4 dị ka ihe ukara format bulite videos. Ọ bụ ezie na ha sịrị bulite MP4 Video, ndusụk ini mgbe ebugote, anyị na-ada bulite MP4 formatted video ka YouTube ruru unsupported codec ma ọ bụ dị iche iche nhazi. Anyị na-na-chọrọ mgbe ụfọdụ dezie anyị video n'ihu na-ebugote ya na YouTube. Ke ibuotikọ emi anyị ga-agwa gị otú ị dezie gị video, tọghata YouTube MP4 akwado usoro na bulite ya YouTube na mfe na hassle freeway.
Nkebi nke 1: Cut / n'Ubi / Dezie / tọghata MP4 n'ihu na-ebugote
Nkebi nke 2: Bulite MP4 ka YouTube
Nkebi nke 3: Gịnị Formats Ọ YouTube Nkwado?
Dị ka anyị maara YouTube anaghị akwado niile formats, ị nwere dezie gị video n'ihu na-ebugote ha. Ka idezie na tọghata video n'ime ziri ezi format, i kwesịrị Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ bụ dị na internet na i nwere ike ibudata ya free.
Nke a bụ ihe kasị mma software, nwere 30x ngwa ngwa video akakabarede ike. Ọ nwere ngụkọta converting ike nke 159 formats. Ha na-imelite ha software site abịa video Ọkpụkpọ na ọ bụ ihe kasị ọrụ-enyi na enyi software. Ọzọkwa ọ nwere atụmatụ na ike ịnyefe ọ bụla video enweghị eriri USB. Ọzọkwa ị pụrụ n'ụzọ zuru okè ike gị n'ụlọ video site onwe gị. Wondershare Video Converter Ultimate Nwere ndị na-esonụ bụ isi ọrụ.
• Kpaa, jikota, n'Ubi, Special mmetụta
• bugharia, Watermark, Ndepụta Okwu
• ịgbanwe akụkụ ruru, Mpịakọta
• ihie, saturation, Tule
• Deinterlacing, Grayscale, na ndị ọzọ!
Nzọụkwụ 1 otú bee / n'Ubi / Dezie MP4 na Wondershare Video Converter Ultimate
Eso nzọụkwụ na-e-egosi gị otú dezie gị video iji Wondershare Video Converter Ultimate.
Tinye Video na ị chọrọ dezie
Wụnye na-agba ọsọ gị Wondershare Video Converter Ultimate.
Pịa ọ bụla na "Tinye Files" buttons ma ọ bụ "Dọrọ na dobe" faịlụ site na ị faịlụ nchọgharị (ọgụgụ: 1).
Mgbe ịpị on "Tinye Files" a obere window emeghe (ọgụgụ: 2).
Họrọ gị MP4 faịlụ na pịa "Meghee"
Ugbu a, ị pụrụ ịhụ gị video na software
N'ihi na edit gị video, pịa "Dezie" button
Ugbu a ihe editable window egosi ebe i nwere ike n'ụzọ zuru ezu ahaziri gị videos
E nwere ise isi na taabụ na a window
Ewepụtụ / Cut Video
Site na "ewepụtụ" i nwere ike bee ọ bụla video maka anam obere clip ma ọ bụ ikwu ihe ọ bụla clip si video
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta ọ bụla obere clip, ị nwere ike iji aka etinye amalite na ọgwụgwụ oge na n'akụkụ igbe (ma ọ bụ)
Họrọ gị chọrọ ogologo nke clip site n'oge akara, họrọ ogologo ga-egosi na green agba
Dị nnọọ ka foto ị nwekwara ike ubi ọ bụla video
N'ihi na cropping gị video, họrọ "Adujst"
Pịa "n'Ubi" akara
A na-acha ọcha igbe ga-egosi na video preview
Ị nwere ike resize na igbe maka gị chọrọ pụta
Ị pụrụ ịhụ cropped etiti mgbe click on "Emela" button
Ugbu a maka inwekwu edit nhọrọ pịa "Mmetụta"
Oke Bekee i nwere ike igosi ọtụtụ ihe dị ka
Site Watermark i nwere ike tinye gị ederede dị ka watermark
Ke "sobtaitel" i nwere ike tinye sobtaitel.
Mgbe ị na-rụchaa gị edezi click on "OK" button
Mgbe edit gị video, ị nwere ike ịhụ nkọwa nke ebe faịlụ.
Nzọụkwụ 2 Olee otú iji tọghata MP4 ka YouTube
"Wondershare Video Converter Ultimate" Ewebata tupu gbanwetụrụ MP4 format na na-kpọmkwem eji maka YouTube video.
Ya mere, anyị họrọ YouTube MP4 format dị ka anyị mmepụta video
Họrọ "mmepụta Format"
Họrọ "YouTube Video"
Nke a format eji ọkọlọtọ video codec H.264 na Audio Codec: AAC-eji maka YouTube
Ugbu a ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, dị nnọọ pịa "tọghata" na gị video ga-esichara gụnyere gị edezi
Ugbu a bụ oge bulite gị MP4 format video ka YouTube. Ị nwere ike ịhọrọ bulite gị MP4 ka YouTube site na kọmputa ma ọ bụ site mobile site gị mma.
Method 1: Bulite MP4 ka YouTube site na kọmputa
Mgbe na-ebugote video ka YouTube, ị ga-eso ndị a mfe nzọụkwụ. Ị nwere formatted MP4 video na kọmputa gị. Ugbu a abanye na YouTube na gị onwe gị Gmail akaụntụ. Ya mere, ị ga-esi na ikike bulite a ọhụrụ video, na mgbe ahụ akaụntụ gị ga-converted n'ime a ọwa.
Open na Abanye
Abanye na akaụntụ gị
Site nri n'elu nkuku họrọ "Bulite" button
On ọzọ window, họrọ converted faịlụ anyị dezie na ike na mbụ na-eji akụ (pụta ìhè) button
Ị nwekwara ike ịdọrọ na dobe faịlụ n'ime na igbe
Ugbu a gị faịlụ na-amalite na-ebugote on YouTube nkesa
Mgbe na-ebugote ị faịlụ gị nwere ike jupụta niile dị mkpa ọmụma banyere gị faịlụ
Ozugbo gị faịlụ a na uploaded, mgbe ahụ, pịa "Asuanetop" button
Ugbu a, mgbe gụchara na-ebugote, ọ ga-redirect gị ka video njikwa, ebe gị niile video ga-echekwa, na i nwere ike ime ihe ọ bụla
Method 2: Bulite MP4 ka YouTube Video si Mobile
I nwekwara ike nwere ohere bulite gị video si gị mobile.
Mkpa ka ị dị nnọọ eso usoro.
1. Gaa YouTube ngwa si gị handset ngwaọrụ. Banye si ọgwụgwụ gị. (Ọ bụrụ na ị na-eji YouTube ngwa oge mbụ).
2. ugbu a gaa ngwa, si n'ụlọ ihuenyo, wee họrọ menu nhọrọ site na ịpị YouTube akara ngosi.
3. N'ebe a, ị ga-enweta bulite nhọrọ na a menu, nke dị mkpa iji na bulite gị MP4 video si mobile.
4. Ugbu a ị na-na bulite page.
5. Ugbu a ebe a ị họrọ MP4 video site na ngwaọrụ gị, na pịa 'họrọ' site na ngwaọrụ gị.
6. Wet ke aha gị MP4 video, nkọwa nke gị video, video nzuzo na kwa na mkpado gị video ịchọ gị video on search engine.
Ebe a bụ foto nwere ozi a,
7. Ugbu a ngwaọrụ ga-egosi gị na-ebugote usoro iheomume na ozi ndị ọzọ. Ngụkọta size gị MP4 video, aha video, aha nke elu Loader, na-ebugote pasent wdg
Ya mere N'ikpeazụ, i ga-esi gị MP4 video on YouTube, site na iji mobile YouTube elu Loader. Ị nwere ike bulite gị video n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla si mkpanaka gị na ngwaọrụ.
Fọrọ nke nta niile ụdị nke videos na-akwado YouTube. Ma nke kacha mma format bụ MP4.
Otú ọ dị, e nwekwara ụfọdụ formats na i nwere ike iji bulite gị video on YouTube. Ebe a niile formats aha e nyere n'okpuru:
MPEG4: MPEG-1 a hụrụ na a .DAT faịlụ na a video CD
MP4: multimedia akpa
AVI: akpa (a shei, nke na-enyere n'ụdị ọ bụla nke mkpakọ na-eji)
WMV: Windows Media Video (Lee ASF)
MPEGPS: Ọ bụ ụfọdụ ala na ọ fọrọ nke nta na-amaghị format
FLV: Flash video (koodu na-agba ọsọ na a flash na-aga aga)
3GP: kasị nkịtị video format n'ihi na ekwe ntị
WebM: Web akwado usoro
Ya mere, ebe a bụ ihe ọmụma zuru ezu otú ị bulite MP4 video on YouTube kpam kpam. Atụ anya na ọ ga-enyere gị a otutu bulite MP4 video on YouTube.
> Resource> MP4> Olee bulite MP4 ka YouTube Kpamkpam